Ubuhle kunye nempilo Ukubonisana kwabasetyhini
Ukutshatyalaliswa sisifo esibandezelekayo esibangela imvubelo efana ne-Candida fungi.
I-thrush ibonakala njani?
Iifungi ze-thrush zikhoyo kwimeko, kwesikhumba kunye neembumba zamanqwanqwa eziluntu. Njengomthetho, ababonisi ngokwabo naluphi na indlela kwaye bahlala behlala kunye nabantu. Kodwa ngokukhawuleza ukuba kukho naziphi na izimo ezingathandekiyo kwimpilo yabantu, i-thrush bacteria isebenze, yande kwaye ibangele ukuvuvukala. Iimeko ezinjalo ezingenakulungeleka zinokuthi buthathaka kwe-immunity, izifo ezahlukahlukeneyo, i-beriberi. Kwiimeko ezinjalo, i-thrush ibhaktheriya inokuchaphazela iimbumba zamanzi (kwisisu, emlonyeni). Ifoto ibonisa umfanekiso we-thrush.
Isizathu esiyinhloko sokuba kwenzeke kwe-thrush kukusetyenziswa kwexesha elide leziyobisi zokulwa ne-antibacterial. Kwi-85% yamatyala esi sifo esingathandekiyo sifo sibonakala emva kokuthatha i-antibiotics.
Ukongezelela kwesizathu esona sizathu, kukho izinto ezibini ezibangela ukuphuhliswa kwesi sifo:
izifo zamalungu omzimba;
Ukusetyenziswa kwexesha elide kweziyobisi zengculaza;
ukusetyenziswa kakhulu kotywala;
Iimeko zeemeko ezingqongileyo;
iingubo zangaphantsi ezinqabileyo (ngokukodwa kwiintambo zokwenziwa);
Ukusetyenziswa kwexesha elide lokukhulelwa kwe-hormonal;
izifo ezinxulumene nomzimba emzimbeni;
Ukwanda kweso sifo nge-thrush, kunokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kosawoti, okuyi-acidic kunye ne-acute.
Iimpawu zokuqala ze-thrush zitshisa kwaye zivutha kwisisu. Njengomthetho, le miqondiso ye-thrush iqala ukuvela iintsuku ezi-7 ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini. Iimvakalelo ezingathandekiyo ziyomeleza ngokuhlwa kwaye zibuthathaka ekuseni. Abanye besetyhini bavalelwa buhlungu ngexesha lokwabelana ngesondo. Zonke iimpawu ze-thrush zithethwa ngakumbi kubasetyhini abaxhomekeke kwi-allergies. Kwamanye amameli abelana ngesini esilungileyo i-itch kunye nokuvutha komlilo kwisisu kungenziwa kunye ne-excense ye-white color.
Ukuhluthwa yisifo esithinta abafazi kuphela. Iinkqubo ezivuthayo ezibangelwa yi-thrush bacteria zingenzeka kumadoda nabantwana.
Yintoni ehlaselwa ngabantu?
Iimpawu zokutshatyalaliswa kwamadoda kwahluka kwabesetyhini:
ubomvu we-glans penis:
intlungu ngexesha lokulala;
Ukuba ezi zimpawu zenzeka, unyango olukhawulezayo lwe-thrush luyadingeka. Esi sifo asidluli ngokwalo. Ukungaqhubi ixesha elide kubangela ukubonakala kwefomu engapheliyo-itrush ephindaphindiweyo.
Ungayilahla njani i-thrush?
I-Thrush ayiyiyo yezifo ezithathelwana ngesondo. Ekubeni i-thrush ibhakteria ikhona kwiimbumba ezinobuninzi kubantu abanobuchopho, kunye nokunyangwa komntu omnye, unyango lomlingani wakhe wesini aluyimfuneko. Nangona kunjalo, ukuba enye ye amaqabane anamandla okanye ahlala engapheliyo kwe-thrush, ngoko ikhosi yonyango kufuneka idluliselwe kuzo zombini.
Amachiza asemthethweni anikezela ngomlomo kunye nezindlela zangasese zonyango lwe-thrush. Kukho izidakamizwa ezininzi ezinciphisa iimpawu zesifo ngosuku olunye. Kodwa ngomyinge, ukukrazula i-thrush kuthatha malunga neentsuku ezili-10. Ukuze kubekho umphumo ogqithiseleyo ngexesha lokonyango, kufuneka ulandele imimiselo yococeko lwakho kwaye ubale ukulala ngesondo. Ukuyeka utywala kunye nokutshaya kuya kunceda ngokukhawuleza ukubuyisela umzimba.
Xoxa ngeempawu ze-thrush uze uthethe "Yintoni ukutshitshisa?" Unako kwi-forum ye-site yethu. Kodwa khumbula - akukho nanye, i-forumchanin enamava amaninzi ayinakukunika isiluleko esinjengoko ufumana kwi-gynecologist emva koviwo.
Iinyanga ezintathu akukho nenyanga
I-Syphilis kubasetyhini - iimpawu
I-Nephrotic syndrome - njani ukusindisa iintso?
Ugonyo lwe-Gardasil - ukukhusela umhlaza wamanje
Ureaplasma parvum - unyango
I-hymen yiyo yonke into ofuna ukuyifumana ngayo malunga nama-hymen
Kutheni i-sperm iphuma kumfazi?
Polyuria - Iimpawu
Kutheni iinyawo zam zikhula esifubeni sam?
I-WFD yesigqeba sesisu
Ubonakaliso obuncinane be-syphilis
Uthando Privorot: Iziphumo
Imilenze yenkukhu kwimayonnaise - iresiphi
Iibhokhwe zabesifazane uMon Ami
Izandla zomkhwa woNyaka omtsha
Lo mbonakaliso owenziwe ngokugqithiseleyo owenziweyo uya kuthusa wonke umntu!
Isaladi kunye noshizi - inhlanganisela engcono yokutya okumnandi kwimihla ngemihla
Jam kusuka kwi-currant ngaphandle kokupheka
Traneksam ngexesha lokukhulelwa kwiinqanaba zokuqala
Isatifikethi sokubambisa imali
Tippet kunye nemikhono
Isitayela sesiNgesi ngaphakathi kwendawo yokuhlala
Uncedo kangakanani i-barley yeparele?
Uthando ngaphandle kwemida: UDavid Hasselhoff oneminyaka engama-65 uceba ukutshata okwesithathu
Iingubo zokuhlwa kwexesha lokugqiba ngo-2014
U-Kaitlin Jenner unokuphinde abe ngumntu
Ikhekhe lePasika kumenzi wesonka